जापानका १२ लाखे कुकका १ लाखे घुर्की ! – Nepal Sandesh
जापानका १२ लाखे कुकका १ लाखे घुर्की !
लक्ष्मण कार्की, जापान
आजभोलि जापानमा नेपाली रेष्टुरेण्ट ब्यबसायी र कुकलाई आफ्नो पेशा भन्न पनि अप्ठ्यारो छ। कुक भनौ १२ लाख तिर्ने भन्लान भन्ने पिर ब्यबसायी भनौ अर्काको पसिना खाने भन्लान भन्ने पिर। सबै तिर्ने र खाने होईनन् तर पनि सोच्नेले सबैलाई उस्तै सोचिदिन्छन्।
जापानमा यदाकदा बाहेक हामी नेपाली कुकलाई जिविकोपार्जनका लागि राम्रै छ भन्दा खासै अन्याय हुदैन। त्यसो त जापानी नियमानुसार सेवा सुविधा छैन भन्ने यथार्थ पनि लुकाउनु राम्रो होईन। तैपनि जापानमा हामी नेपालीहरुकै एक आपसका ब्यबहारले गर्दा दुःख पाउने अबस्था पनि छ।
काम दिने सर्तमा बोलाएर काम नदिने, काम गर्नै नजानेकोले काम जानेको छु भनेर झुटा सर्टीफिकेट पेश गर्ने, राम्रो तलब दिन्छु भनेर नदिने अनि त्यो पनि समयमा नदिने जस्ता एक अर्कामा धोका दिने प्रवृतिले कैयौ आफन्तका सम्बन्ध छुटेका छन्। कैयौका एक आपसमा मन भाँचिएका छन्।
यस्ता कुराहरु थाहा हुदाहुदै पनि नेपालबाट कुकका रुपमा जापानमा हामफाल्नलाई कस्सिएको कस्सिएका छन। ल्याउनेले पनि ल्याएको ल्याएइ छन्,त्यसमा पनि दश बाह्र लाखमा। तर अचम्म त के छ भने यथार्थ थाहा हुदा सुत्नेहरु, जब जापानमा कुक भिषामा आएको ब्यक्ति कसैको मृत्यु हुन्छ वा अलपत्र पर्छ तब उठ्छन र जापान ल्याउने साहुलाई भत्तो सराप गर्न थाल्छन।
तर यस्ता समस्या आउनु पुर्व हामी आफै पनि अलिकति सचेत हुने हो भने जापान आएर अलपत्र पर्नु पर्ने थिएन जो कुक भिषामा आउदै हुनुहुन्छ र आफैमा दक्षता छैन उसैलाई सहयोगि होस् भन्ने आशयले यो मेरो ब्यक्तिगत बिचार प्रस्तुत गरेको छु ।
सबै भन्दा पहिला हामीले बुझ्नु पर्ने कुरा जापानका रेष्टुरेण्ट मालिकले नेपालमा पुगेर मैले तलाई कुक बनाएर जापान लैदिन्छ, महिनामा यति तलब दिन्छु लौन गईदिनु पर्यो भनेर हारगुहार सायद कसैले पनि गरेको छैन । हामी जापान आउन चाहनेले नै लौन हजुर मलाई जापान लगिदिनुस् लागेको पैसा तिर्छु १० देखि १२ लाख जति लाग्छ भनेर सुरुमा हामी आफै अनुरोध गर्छौ ।
हाम्रो यहि कमजोरीलाई कसैले फाईदा उठाए होलान तर कोहि कसैले हुन्छ म लैजान्छु भन्ने पाएमा आफुले आफैलाई ठग्दै कागजपत्र बनाउन शुरु त हामी आफै गर्छौ ।
त्यसैमाथि प्रशासनलाई समेत ठगेर २२ बर्षलाई ३२ पुर्याउन समेत पछि पर्दैनौ । त्यस पछि दश बर्षे अनुभवी कुक बन्नलाई फेरी पैसा तिरेर कागज पत्र तयार गर्छौ तर हामी काम सिक्ने तयारी गर्दैनौ। हो जापान मा गईसके पछि महिनामा १ लाख आम्दानी हुन्छ । १लाख तलब हुन्छ भनेर भन्ने ब्यक्ति पनि होलान।
यसै सन्दर्भमा जापानमा साहुले मात्रै होईन अन्य मान्छेले अनेक बहाना गरेर नेपालीले नेपालीलाई नै ठगेका घटनाहरु पनि उल्लेख गर्नु उपयुक्त ठाने। यति सम्म कि जापानमा आफु कार्यरत रेष्टुरेण्टको साहुसंग साख्यै बनेर आफ्नै संगी साथी आफन्तलाई फ्रीमा जापान ल्याउने तर साहुलाई नभन्ने कसम खुवाउने अनि ८ देखि १० लाख सम्म लाख चट्काउने।
पेपर मात्रै ल्याएर साहुलाई दिए पनि साहुले लिने पैसा भन्दा १ देखि २ लाख बढि नेपालका आफन्तबाट नै आफुले असुल्ने जस्ता कार्य पनि भएका छन् । तर जापान नछिर्ने समयसम्म जे भने पनि हुन्छ भन्ने जापान आईसके पछि पाखुरा सुर्केर पनि समस्या समाधान हुने अबस्थामा छैन।
त्यस्तै यहाँ बिधार्थी भिषा तथा डिपेण्डेण्टमा आएका मान्छेलाई पनि आफ्नो कम्पनीमा परिचय गराएर काम लगाईदिए बापत ३ देखि ४ मान ठटाएर ल्याउने नेपाली पनि छन् । यो पनि अन्याय नै होला एक नजरले हेर्दा। तर काम नपाउदा काम लगाईदेउ बरु पैसा दिन्छु भन्ने अनि काम पाईसके पछि फलानोले यति पैसा खायो भनेर बदनाम गरेर पनि केहि हुनेवाला छैन।
जापानमा कुक भिषामा आउन चाहने जो हुनुहुन्छ सबै भन्दा पहिला आफ्नो हातमा सीप सिकेर आउनुहोस् । आजका दिनमा पनि भनेजस्तो कुकको खोजी गर्ने रेष्टुरेण्ट मालिकहरु पनि छन ।
आफ्नो हातमा सिप भए जापान ल्याउने मान्छेले काम नदिए पनि काम पाउन गार्हो छैन । तर शुरुवातका दिनमा एकातिर पारिवारिक बिछोड ,काम नपाउने समस्या,काम पाए पनि ऋण गरेको १२–१५ लाखको ब्याज तिर्नसम्म नपुग्ने तलब, यस्तो अबस्थामा मानसिक रुपमा छट्पटी हुनु स्वभाविक हो।
यसको सामना गर्न सक्ने मानसिकता पनि तयार गरेर आउदा राम्रो हुन्छ । मैले जापानमा मरे पछि सहयोग गर्ने तर जिउदैमा ऋण माग्दा नपत्याउने मान्छे पनि भोगेको छु ।
यदि जापान आएर समस्यामा परेमा फलानाले ल्याएर अलपत्र पारेछ भनेर बाजा बजाउने जति होलान् काम रहेन्छ आईज मैले काम लाईदिन्छु मेरोमा काम गर भन्ने त्यति छैनन्।
त्यसैले कसैले १२ लाख दिए मैले जापान लैजान्छु महिनावारी तलव १ लाख दिन्छु भने पनि विश्वास नगर्दा राम्रो हुन्छ। तपाईहरुले देखाएको काम नजाने १२ लाख तिरेको छु भन्दैमा बसी बसी १ लाख दिने होईन ।
१ लाख का लागि त फेरि आफ्नो हातमा सीप हुनु पर्यो । कामको पैसा दिने हो साहुले, नेपालबाट आउदा लिएको १२ लाख तिर्ने होईन । त्यसैले आफ्नो हातमा सीप छैन आफ्नो योग्यता छैन भने १२ लाख लिन्छु महिना बारी १ लाख दिन्छु भनेको हो भनेर समस्या समाधान हुनेवाला छैन ।
समस्या पर्नुपुर्व नै सचेत हुनु नै उत्तम होला। हैन भने साहुजीहरुले जापानमा १२ लाखे कुकका १ लाखे घुर्की भन्ने दिन नआउलान भन्न सकिन्न ।
Posted in जापान समाचार, विशेष